လောင်းကစားဆိုသည်မှာ "ငွေ ကိုဖြစ်စေ၊ အခြားတစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ တန်ဖိုးထပ်၍ မသေချာ မရေရာမှု တစ်ခုကို အရဲစွန့်ပြုလုပ်ခြင်း" ဟု အနောက်နိုင်ငံ စွယ်စုံကျမ်းတစ်ခုတွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ တစ်နည်း အားဖြင့် ကံကိုယုံပြီး အချို့တစ်ဝက်ကို ဖြစ်စေ၊ အားလုံးကိုဖြစ်စေ ပုံအော လိုက်ရခြင်းဟူ၍လည်း ဆိုနိုင်သည်။
၃ အားကစားနှင့် လောင်းကစား
၆ ထီသည် နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေတိုးရေးလက်နက်လော
၇ လောင်းကစား အဆိုးလား အကောင်းလား
၉ ၂၁ ရာစုလောင်းကစား
တရားဝင်နှင့် တရားမဝင်လောင်း ကစားနည်းပေါင်းများစွာ ရှိသည်။ တရားဝင် လောင်းကစားမှုကို အစိုးရ ဌာနများ၊ အကျိုးအမြတ်မယူသည့်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ကုသိုလ်ဖြစ် အသင်း အဖွဲ့များအတွက် တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင် ခွင့်ပေးထားသည်။ တရားမဝင်လောင်း ကစားခြင်းသည် သီးခြား ပုဂ္ဂလိက သဘောဆောင်ပြီး ဒိုင်များမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ မြေအောက် အဖွဲ့အစည်းများဦးစီးသည့် တရားမဝင် လောင်းကစားခြင်းတွင် ခေတ်ပေါ် အင် တာနက်မှတစ်ဆင့် ဂိမ်း(Game) ဆော့ ခြင်းအထိ ပါဝင်လာသည်။ လောင်း ကစားခြင်းဆိုသည်မှာ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း ရေပြိုင်ကူးခြင်းမှသည် တစ်နေရာတွင်ထိုင်ပြီး ပိုကာဆွဲခြင်း အထိပါဝင်သည်။ တရားဥပဒေအရ မည်သည့် လောင်းကစားခြင်းသည် တရားဝင်သည် မဝင်သည်မှာ ပြည်နယ် နှင့် ဒေသအခြေအနေကို လိုက်ပြီး အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သောကြောင့် ရှုပ် ထွေးသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ အချို့သော ပြည်နယ်တိုင်းဒေသများတွင် နိုင်ငံခြား ခရီးသွားဧည့်သည်များကို မက်လုံးပေး ဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အလို့ငှာ တရားမဝင် ဟူ၍ အစိုးရက သတ်မှတ်ထားသည့် လောင်းကစားခြင်းများကို တရားဝင် ကစားခွင့်ပြုကြရသည်ဖြစ်သောကြောင့် လောင်းကစားအတွက် တရားဝင်ခြင်း၊ မဝင်ခြင်းသည် သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု အသွင် ဆောင်သွားရပြန်သည်။
ခွေးပြိုင်ပွဲသည်လည်း မြင်းပြိုင်ပွဲ ကဲ့သို့ နှစ်ဦးသဘောတူ လောင်းကြေး ထပ် ကစားနည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သို့သော် မြင်းပွဲလောက် ကျယ်ပြန့်မှု မရှိပေ။ အခြားတိရစ္ဆာန် ပြိုင်ပွဲများ ဖြစ်သည့် ကြက်တိုက်ပွဲ၊ နွားတိုက်ပွဲ ကဲ့သို့သော ပြိုင်ပွဲများလည်း ရှိသေး သည်။ သို့သော် တိရစ္ဆာန်ညှင်းပမ်း နှိပ်စက်မှုကို တားမြစ်ထားသည့် ဥပဒေ များကြောင့် ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် သိပ် မလုပ်ဝံ့သည့် လောင်းကစားပွဲများ အဖြစ်သာရှိနေသည်။ တိရစ္ဆာန်များဖြင့် လောင်းကစားခြင်းကို အမေရိကန်တွင် တားမြစ်ထားသည့် ပြည်နယ်များရှိ သကဲ့သို့ ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အရ ခွင့်မပြုသည့် နိုင်ငံအများအပြား ရှိသည်။
လောင်းကစား အဆိုးလား အကောင်းလား[ပြင်ဆင်ရန်]
လောင်းကစားခြင်းသည် သမိုင်း နှင့်ချီပြီး ရှိခဲ့သည်ဆိုစေ အကောင်း နှင့်အဆိုး ကြောင်းကျိုးပြ ငြင်းခုံစရာ တော့ဖြစ်သည်။ ဥပဒေဖြင့် အကာ အကွယ်ပေးထားသည့် လောင်းကစား ကို နှစ်သက်သူများက မတရားမှု အကြမ်းဖက်မှုများကို ရှောင်လွှဲစေနိုင် သဖြင့် နှစ်သက်သဘောကျသော် လည်း လူတိုင်း ကိုယ်ပိုင်ငွေကို စိတ် တိုင်းကျ လောင်းကစား လိုကြသည် ကတော့ သဘာ၀ဖြစ်သည်။ တရားဝင် လောင်းကစားခွင့်ပြုခြင်းသည် စီးပွား ရေးအရ အစိုးရကို အကျိုးအမြတ်ရှိ စေရုံမျှမက ဆင်းရဲသားများကိုလည်း အလုပ်ပိုလုပ်စေရန် ဆွဲဆောင်မှု ရှိစေ နိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ပြည်နယ်နှင့် မြို့တော်အသီးသီးတွင် လောင်းကစား ကိုခွင့်ပြုထားခြင်းဖြင့် အခွန်ငွေကို တိုးပွား ရရှိစေနိုင်သလို ပညာရေး ထောက်ပံ့မှုကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင် စေသည်။ လောင်းကစားသည် နိုင်ငံ ခြားသား ဧည့်သည်များကို ဆွဲဆောင် ရာရောက်သည်ဟူ၍ ပြောကြသည်။ လောင်းကစားကိုခွင့်မပြုလျှင် တရား မဝင်သဘောဖြင့် လောင်းကစားကြ မည်။ သို့ဖြစ်လျှင် နိုင်ငံ၏ဝင်ငွေသာ လျော့နည်းဖွယ်ရှိသောကြောင့် တရား ဝင် လောင်းကစားခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် ပြည် သူများလည်း စိတ်ပြေ နိုင်ငံလည်း ဝင်ငွေတိုးစေဆိုသည့်သဘောဖြင့် ခွင့်ပြု လုပ်ဆောင်နေကြသည်က များသည်။
တိုင်းပြည် စီးပွားတိုးတက်ရေး အတွက် လောင်းကစားဖြင့် နိုင်ငံခြား ဧည့်သည်များလာရောက်ရန် လုပ်ဆောင် နေကြသည့် နိုင်ငံများတွင်လည်း လောင်းကစားဖြင့် မဟုတ်ဘဲ အခြား ဖျော်ဖြေရေးပွဲများဖြင့် စည်းရုံး ဆွဲ ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းမှုများရှိပေသည်။ ထို့ပြင် လောင်းကစားမှရသည့် အခွန် အကောက်များဖြင့် တိုင်းပြည်ကြီးပွားရာ ကြီးပွားကြောင်းလုပ်မည့်အစား အခြား နည်းလမ်းများရှာပြီး လောင်းကစားကို လုံး၀ခွင့်မပြုရန် စေတနာထား တင်ပြ ချက်များ ရှိနေကြသော်လည်း လောင်း ကစားခြင်းသည်သာ ငွေရလွယ်သဖြင့် မျက်စိမှိတ်နေကြရသည့် အစိုးရလည်း များစွာရှိသည်။ အခွန်ကိုအခြားနေရာ များတွင် မည်သို့ တိုးမြှင့်ကောက်ခံ သည်ဖြစ်စေ ပြဿနာ ကင်းနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ အခွန်ဆောင်ပြည်သူများ အနေဖြင့် အခွန်တိုးနှုန်းကို ကန့်ကွက် ငြင်းဆန်ကြမည် ဖြစ်သော်လည်း ထီ လက်မှတ်တစ်စောင် ဈေးနှုန်းတက် သွားမှုကို ကန့်ကွက်စရာအကြောင်း မရှိပေ။ ထီကိုအခြေမခံဘဲ အခြား လောင်းကစားမှရသည့်ဝင်ငွေကို အခြေခံ ထား၍လည်းမဖြစ်ပေ။ အခြား လောင်း ကစားများသည် ထီလောင်းကစားရာမှ ရရှိသည့် အခွန်ဝင်ငွေလောက် တည် ငြိမ်မှုမရှိသဖြင့် အစိုးရတိုင်းလိုလို ထီကို မျက်စိကျရသည်မှာ သဘာဝကျပေ သည်။
လောင်းကစား ဒိုင်များသည် တရားဝင်သည်ဖြစ်စေ တရားမဝင်သည် ဖြစ်စေ ဆက်လက်တည်မြဲနေနိုင်ကြဦး မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူတွေ၏စိတ်နှင့် ထွက်ပေါက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ စိတ်ဆိုသည်မှာ လောဘ ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ထွက်ပေါက်ရှာခြင်းသည် ထွက်ပေါက်မရှိခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ် နိုင်သလို ထွက်ပေါက် ပိတ်နေခြင်း ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ လောဘ စိတ်တွေကို လူသားမှန်လျှင် အတော သတ်နိုင်စိတ်တော့ ထားနိုင်ရန် လွန်စွာ ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ တစ်ရာရင်းပြီး တစ် ထောင်ရမည်ဆိုသည့် မက်လုံးကို လောလောဆယ် တစ်ရာဆုံးရှုံးခံလိုက် ရခြင်းသည် စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဆိုဆို၊ လူတွေက ငွေရလို့ ငရဲတွင်း ခုန်ဆင်းရမည်ပြောပြော "အခုလား" ဟူ၍ မေးမည့်သူချည်းသာ ဖြစ်နေပါ လိမ့်မည်။
Ref : Gambling by William N. Thompson How Lotteries Work http://www.howstuffworks.com/lottery.htm http://www.naspl.org/
Maroney, Kevin (2001). "My Entire Waking Life". The Games Journal. Retrieved 17 August 2008. nha cai uy tin
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လောင်းကစားခြင်း&oldid=723871" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။